प्रधानमन्त्रीलाई लेटाङका निरजको खुल्ला पत्र – Letang Khabar
प्रधानमन्त्रीलाई लेटाङका निरजको खुल्ला पत्र
Letang Khabar सोमबार, बैशाख ०३, २०७५
आदरणिय प्रधानमन्त्रि ज्यू,
भारत भ्रमण त मुनासिव नै रह्यो नि ? भनेजति र यहाँ गर्छु भनेजति गरेरै आउनुभयो नि ? तपाइ त माननिय अरु प्रधानमन्त्रि जस्तो चानचुने होइन भन्नुहुन्थ्यो , भयो होला, हैन ?
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग लिपु लेकको बारेमा के कस्ता कुराकानी गर्नुभयो ? लिपु लेक र कालापानीमा भारतले देखाएको दादागिरी हल भयो त ? कोशीले वर्षेनी सयौं नेपालीको उठिबास लगाउने करोडौ जनधनको क्षति गर्ने गरेको छ, कोशी बाँधको सम्बन्धमा दिर्घकालिन सम्झौता भयो होला नि ?
भारतीय सीमा सुरक्षा बल ( एसएसबी) ले नेपालको जमिन टेकेर नेपालको सुरक्षा प्रणालीलाई खिल्लि उडाईरहेको छ, सीमा अतिक्रमण झन् बढेको छ, यसलाई रोक्न कुनै ठोस् कदम चालियो कि ? पञ्चेश्वर, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेश्रो, हुलाकी राजमार्गबारे जावफ मागियो कि मागिएन ।
तपाइको भारत भ्रमणका सन्दर्भमा सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको विषयमा केही गम्भिर निर्णय र छलफल हुने योजनाहरु थिए । तर ती एजेण्डा कागज मै गायब भए जस्तो छ ।
किन गयाब भयो मन्त्रि ज्यू ? कि सबै कुरा विज्ञानमा पीएचडीको मानार्थ उपाधिले डा. के पि बनेपछि बिर्सिएको त हैन ? खास के होला ?
कुरा गरि साध्य नहोला तर हावा कुरा त चौतारीमा साँप्रा ठटाएर बस्ने बाजेहरुले पनि गरेकै छन् । दिनभरि गाँजा तानेर बेलुकी पत्नी कुट्ने ‘ट्यापे’ले पनि साथिभाईहरुसँग हाँसो मजाक त गरेकै हुन्छन् ।
२०७२ सालमा भारतीय नाकाबन्दीका बेलामा चुलाचुलामा ग्याँस, हावा बाट बिजुली, चुच्चो परेको रेलको सपना बाँड्ने, नसकिदैनन् । अझै छन् । नाकाबन्दी सकिएपछि सबै पिरब्याथा भुलेर मालिक जी हजुरी गर्ने । यो त आठौँ आश्यचर्य भएन र ?
तपाइ त कस्तो प्रधानमन्त्रि…? देशका कुना कुनामा रहेका विद्यालयमा छानो छैनन त ?, शिक्षक खै ? औषधि खै ? अस्पतालमा जाबो जीवनजल पनि छैन भन्छन् त ? खानेपानीको त के कुरा बाटो खै ? तुइन तोड्ने भनेको हैन खै त ? शुन्य भ्रष्टचार भनेको के हो ? महालेखा परिक्षकको कार्यलयले पेश गरेको प्रतिवेदनमा त ५ खर्व ८ करोड बेरुजु देखिएको छ रे त ? के गरिदै छ ? कर्मचारी माथि शोधपुछ शुरु भैसको होला नि ? एक महिना पनि टिक्न नसक्ने पिच बनाउने ठेकेदारलाई कारबाही भयो होला नि ?
प्रधानमन्त्रि ज्यू अहिले नेपालमा रेल र पानी जहाज मात्र चाहिएको जस्तो गरेर जहाँ पनि रेल र जहाज मात्र भन्दै हिड्नुहुन्छ, त्यति मात्र छ नेपालमा गर्न बाँकी ? अस्पताल, औषधिको मुल्य सस्तो बनाउनुहोस न, महङ्गी कम गर्नुहोस्, प्रतिव्याक्ति आय बढाउनहोस्, रोजगार र सोरोजगार बढाउनुहोस, आन्तरिक लगाानीमा ध्यान दिनु, यिनै साना कुराले तपाइलाइ सफल बनाउनेछ । छोडिदिनु हो रेल र तेलका कुरा, त्यो तपाइको बसमा छैन, तपाइको बसमा शिक्षालय, बाटो, औषधि, कूलो, विधुत जस्ता साना साना कामहरु छन् । कानुनलाइ व्यावहारिक बनाउनु होस न, नेपाल त्यसै समृद्ध, कि कसो ?
कतै रेल र जहाज भन्दा भन्दै २|४ साल गयो भने तपाइले भने जस्तै अबको ५ वर्षमा नेपाल नेपालै रहदैन है । २०७५ सालको मेरो यही छ शुभकामना प्रधानमन्त्रि ज्यूलाई है त ।।।
अनि तल हेर्नुहोस त,एउटामात्र उदाहरण ,,,,,,